Izindaba - Kuyini ukuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo?
Okuthiwa ukuqapha kokushaya kwenhliziyo kuwashi elingarekhoda ngokunembile izinga lokushaya kwenhliziyo yethu ngesikhathi sangempela ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba. Indima yokuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo ekuzivocavoca okunenjongo isobala kakhulu.
Kunemigomo emibili ejwayelekile yokulinganiswa kwetafula lokushaya kwenhliziyo, eyodwa indlela yokulinganisa yamanje yenhliziyo, kanti enye indlela yokukala yokudlulisa isithombe.
Isilinganiso samanje senhliziyo
Umzimba wethu womuntu uzokhiqiza amandla wamanje wenhliziyo ngaso sonke isikhathi lapho inhliziyo ishaya, ibhendi yesifuba senhliziyo engenantambo iyithuluzi elinjalo elingabona amandla wamanje wenhliziyo. Isiqeshana sepali senzwa sitholakala ezinhlangothini zombili ngaphambili kwebhande lesifuba. Ngemuva kokuthi umsebenzisi afake ibhande lesifuba, isiqeshana sepali ebhentshini lesifuba siqoqa ubukhulu bokuguquguquka kwesimo senhliziyo se-exerciser, bese siyithumela kumitha yokushaya kwenhliziyo ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokuhambisa okungenantambo ukuyiguqula ibe yinani le-BPM yesilinganiso senhliziyo ukubonwa okulula. Njengamanje, lena indlela ejwayelekile futhi enembile yokukala izinga lokushaya kwenhliziyo ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba.
Isimiso siyefana naleso se-electrocardiogram. Enye inzuzo yale ndlela yokukala izinga lokushaya kwenhliziyo ukuthi ingalinganiswa ngokuqhubekayo ngesikhathi sokuvivinya umzimba.
Indlela yokukala ukudluliswa kwe-Photoelectric
Izilinganiso ze-Photoelectric zisebenzisa izinguquko ekumungeni kwe-hemoglobin emithanjeni yegazi ukukala ukushaya kwenhliziyo. Iwashi lifakwe iluphu logongolo lwe-infrared kanye ne-loop eyamukelayo nebonisa. Ubuhle bale ndlela ukuthi kulula kakhulu ukukala izinga lokushaya kwenhliziyo ngaphandle kwebhande lesifuba. Kodwa-ke, ngoba isignali ibuthakathaka kakhulu futhi kulula kakhulu ukuphazanyiswa umhlaba wangaphandle, idatha yesilinganiso ayinembile, futhi ngokuvamile idinga ukukalwa isesimweni sokuthula, ngakho-ke ayifanele ukulinganisa okuqhubekayo kokushaya kwenhliziyo ngesikhathi ezemidlalo.
I-Green Light Photogrammetry iqukethe i-wavelength eluhlaza okwesibhakabhaka ekhipha i-LED kanye nenzwa ye-photosensitive etholakala ngemuva kwe-monitor rate monitor. Umgomo ususelwa kuzinguquko ekucineni kwemithambo yegazi engalweni ngesikhathi se-pulsation, okuholela ekuguqulweni kokudluliswa kokukhanya. Ama-LED akhipha ukukhanya akhipha ubude bokukhanya obuhlaza okwesibhakabhaka, futhi izinzwa ezithwebula izithombe zithatha ukukhanya okuvela esikhunjeni sengalo futhi zikala ushintsho ekuphakameni kwensimu yokukhanya bese zikuguqula kube ukushaya kwenhliziyo. Ubuchwepheshe njengamanje busetshenziswa ngabaqaphi bezinhliziyo zenhliziyo iMio Alpha, Fitbox HXM kanye ne-Adidas Smart Run e-US. Isilinganiso sokukhanya kwenhliziyo okukhanya okuluhlaza okotshani okuluhlaza sishiye ngokuphelele ibhendi yesilinganiso senhliziyo, futhi singaqhubeka ngokulinganisa isilinganiso senhliziyo, ukubala isilinganiso senhliziyo, qopha isilinganiso sokushaya kwenhliziyo, setha isikhawu se-alamu yokushaya kwenhliziyo.
Uchungechunge Lokuqina Komphakathi
Ingxenye esemqoka yochungechunge lokuqina ifinyelela kuzindlela eziyi-18 zokuvivinya umzimba. Imodi yokuzivocavoca isuselwa esimweni sabo somzimba esivivinya ngokuzenzakalela ibanga lokuzivocavoca kwenhliziyo. Iqinisekisa ukuthi yonke imisebenzi oyenzayo iyasebenza futhi iphephile.
Ungasebenzisa ngisho nezici ezimbili ezihlukile zokuqhubeka kwenhliziyo yakho ngokuya ngemigomo yakho yokufaneleka. Ngaphezu kwalokho, i-Fitness Series iza nebhendi elibukhali elibucayi le-silicone elinikezela ngolwazi olunembile, lwesikhathi sangempela senhliziyo ngesikhathi sokuzivocavoca kwakho. Uchungechunge lokuqina lomphakathi iningi labathanda ukuqina, ukonga, ukukhetha kwakho kokuqala.
Kudinga ukuzimisela nesibindi ukuze ube ngumgijimi onekhono.
Uma ufuna ukwenza kangcono, udinga ukusebenzisa ikhanda lakho. I-Running Heart Rate Monitor iguqula imininingwane ibe yijubane, engakusiza ukuthi usebenze kahle futhi ugweme ukujuluka okungenamsebenzi ngesikhathi sokuzivocavoca kwakho.
Ingabheka ngokunembile ukushaya kwenhliziyo, ibanga lokuhamba ngebhayisikili, isivinini, izikhathi zamathanga, ukukhishwa kwamandla nemephu yomgwaqo.
Kukunika amandla wokukhulula amandla amakhulu njengomgijimi okhokhelwayo.
Uchungechunge Lokuphathwa Kwesisindo
Kwenziwe ngezifiso. Izokuhlelela uhlelo lokulawula isisindo, ikutshele ukuthi kufanele wehlise isisindo esingakanani ngasiphi indlela nokuthi nini. Ngokweqile, umhloli wokushaya kwenhliziyo uzokugcina ebangeni le-bullseye, okuyisiqondisi sokuqina.
Inqobo nje uma uyigqoka esihlakaleni sakho bese ulandela nje izeluleko zohlelo nsuku zonke, ungafinyelela kancane kancane esilinganisweni sakho esifanele. Izokushukumisela futhi ikusize uhlale ukhuthazekile. Kulula ukuyisebenzisa futhi ugcina intuthuko yakho nsuku zonke nangesonto. Kungakusiza ukuthi ufeze futhi ugcine isisindo sakho esifanele, sikuvumele ukuthi uzuze imiphumela yangempela yokuqina.
Isikhathi Iposi: Mar-05-2021